Ma la yaaban tahay waallidu maxay tahay? Cudur la ogaan karo oo la daweyn karo? Natiijada hanti-xumada? Mise ka dhasha xaalad bulsho iyo mid siyaasadeed? Ma "qofka waalnaa" ayaa ka masuul ah falkiisa? Waalidu miyay daaha ka qaadaysaa run ka jirta bulshada iyo mid kasta oo inaga mid ah? Inta tariikhda la joogo, mufakiriinta waaweyn, hadday yihiin faylasuuf, culimo-culimo, dhakhaatiir, cilmi-nafsi-yaqaano, cilmi-nafsi-yaqaanno, cilmi-nafsi-yaqaanno, taariikhyahanno iyo farshaxan-yahanno ayaa isla su’aalahaas is-weydiiyey oo waxay soo saareen aragtiyo iyo qalab ay uga jawaabaan. Iyadoo Mooc "Taariikhda matalaada iyo daaweynta waalida", waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ogaato.
6 kalfadhi oo dukumeenti ah, khabiiro ka socda akadeemiyada, daawada, iyo dhaqanka ayaa soo bandhigi doona 6 mawduuc oo muhiim ah si ay uga jawaabaan su'aalahaaga ku saabsan matalaada iyo daaweynta waalida.
Haddii aad rabto inaad hesho oo aad ansixiso aqoonta ku saabsan hababka kala duwan ee waalidnimada taariikhda oo dhan oo aad fahamto doodaha waaweyn ee casriga ah ee ku saabsan caafimaadka dhimirka, MOOC-kan ayaa si fiican kuu noqon kara adiga!
Taariikhda matalaadda iyo daaweynta waallida Diisambar 19, 2021Tranquillus
READ Bandhigyada qasabka ah: waa maxay waajibaadkaagu sanadka 2021?
horeKu barnaamijka shay Arduino
socdaKa shaqee Faransiiska A2-B1
Maxay Faransiisku (re) u bartaan qorista?
Sida loogu isticmaalo YouTubeBUDDY-gaaga YouTube SEO
Abuur Ganacsi Internet Ah Oo Faa'iido Leh: Habka La Taaban karo!
Shaqaynta taleefanka: shaqaaluhu ma ka faa'iideystaa foojarrada cuntada?